बिरालोहरु समय अंकन किन: यसको जवाफ
बिरालो - संसारमा सबैभन्दा सुन्दर र मनोरम जनावरहरूको एक। 10,000 भन्दा बढी वर्ष पुरानो, त्यो केही बिन्दु बिरालो व्यवहार मा एक मानिस छेउमा पक्ष बसोबास भन्ने तथ्यलाई बावजुद हामीलाई एउटा रहस्य रहनेछ। उदाहरणका लागि, वैज्ञानिकहरू अझै पनि तिनीहरूले के अधिकार purr भन्दा आफ्नो टाउको scratching छन्। अर्को यस्तो प्रश्न-रहस्य धेरै साईट मालिकहरूको लागि हुन्छ: "? किन बिरालोहरु पानी treading"।
सबै संस्कृतिका मा यी पशुहरू - सान्त्वना र घर को एक प्रतीक। यो यी furry जनावर आफ्नो वासस्थानमा को ठाउँमा रूपमा, त्यसैले धेरै आफ्नो मालिक संलग्न छैनन् भन्ने तथ्यलाई कारण छ। त्यसैले, आफ्नो घर फर्कन केही बिरालोहरु किलोमिटर हजारौं यात्रा गर्ने बारे यस्तो बारम्बार कथाहरू। र तपाईं bewilderment मा एक बिरालो, यो गर्न सजिलो तरिका प्रविष्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने, अपार्टमेन्ट मा फर्नीचर पुनर्व्यवस्थित: एक परिचित वातावरण देखेर बिना जनावर, तनाव फस्न। यी पाल्तु जनावर विभिन्न सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक संगठन हो किनभने बस, यो ज्यादा छैन।
सामान्य मा, तपाईं कसरी तिनीहरूलाई अर्को, तपाईँले तपाईं सबै थाहा छ कि निर्णय जीवन बिताउन थियो बिरालोहरु, घरेलू बिरालोहरु छन् तपाईं चकित तुरुन्तै तयार छ। उदाहरणका लागि, अचानक बुढेसकालमा मेरो गरेको मनपर्ने को एक एक स्वेटर मा चिनो प्रेम angora ऊन , र हरेक तरिका मा चूसना। तर बिरालोहरु किन समय अंकन छन्? यो कार्य pitomitsy मलाई स्टम्प्ड राखे। plaid, मानव शरीर, एक तकिया, एक कम्बल - पछि, अन्य जनावर देख, म तिनीहरू अक्सर न्यानो र नरम सतह मा के भनेर फेला परेन। यस मामला मा, बिरालो एक जोर purr emits र कडा आफ्नो खुशी व्यक्त।
Felinologists बिरालोहरु समय अंकन किन मा धेरै वैज्ञानिक कागजात लिखित। तिनीहरू सबै वयस्क बिरालोहरु बाल्यकाल को अन्त ट्रिगर सहमत हुनुहुन्छ। तथ्यलाई पनि बिल्ली को बच्चा सानो र पनि Fed आमाको दूध हुँदा, उहाँले रुचाउने को प्रक्रिया मा दूध को राशि वृद्धि गर्न यस्तो "toptatelnye" आन्दोलन पंजे पंजे पेट-बिरालो आमा बनाउँछ भन्ने छ। यी आन्दोलनहरु "Milky चरण।" भनिन्छ साथै, खाने, बिल्ली को बच्चा purrs गर्दा, साथै उहाँले सबै सही भन्ने देखाउँछ, उहाँले खाने र साधारण सन्तुष्ट, ठीक ठाउँमा छ। प्रतिक्रिया मा, आमा बिरालो पनि purrs र शावक licks।
यो अन्त जीवनको लागि हुर्किसकेका बिरालो द्वारा खुलिरहेको। तपाईं यसलाई pet भने, यो एक "चाट" बिरालो-आमा रूपमा सन्दर्भमा र तपाईंले खुट्टा वा उपयुक्त सतह "मुछ्नु" गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। किन बिरालोहरु अंकन अर्को कारण भोक हुन सक्छ: त्यसैले तिनीहरू खुवाउन सोध्नुहोस्। खैर, वयस्क मा feline topotushek लागि मुख्य कारण - तिनीहरूले केवल आफ्नो जीवन सन्तुष्ट तिनीहरूले न्यानो र शान्त छौं। खैर, तपाईं अंकन pitomitsy मा ट्रिगर गर्न सक्नुहुन्छ: यो सन्तुष्ट छ भने, यो आफ्नो ब्रश, खुट्टा जस्तै जोडेको एउटा उदाहरण देखाउन पर्याप्त छ - प्रतिक्रिया र नै चिनो सुरु खुसी एक बिरालो। केही जनावरहरू पनि आफ्नो पंजे पंजे सपना अवस्थामा बाहिर क्रमबद्ध गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं देख्न रूपमा, बिरालोहरु तिनीहरू अझै पनि रहस्य को epitome किन कि हो, मान्छे पहेली प्रेम। आफ्नो व्यवहार केही सुविधाहरू एक व्यक्ति मान्छे कार्य र बिरालो किनभने, विशेष भावना को एक अर्थमा कारण, "Milky चरण।"
Tver मा पशु चिकित्सा क्लिनिक: veterinaries "ओह यो कसरी Hurts"
के राम्रो labyrinth माछा
पाल्तु जनावर Sematary। एक पाल्तु जनावर कहाँ मुर्दा गाड्नु गर्न? जनावर लागि अन्त्येष्टि सेवाहरू
लक्षण र उपचार: मा बिल्ली च्याउ
जंगली बिरालो: कसरी हात र ट्रेमा रत्तीएको गर्न?
कसरी र के rotting देखि Woodworking मा आयोजित छ?
सेन्ट पीटर्सबर्ग मा Polovtsev हवेली: वर्णन, इतिहास, रोचक तथ्य र समीक्षा
घर भारोत्तोलन: अनुहार मास्क firming
महिला नाम: रूसी परम्परा
मृत्यु अगमवक्ता: इतिहास, फोटो, नक्कली। कसरी मृत्यु अगमवक्ता लागि खेल्न?
Gergeti चर्च: विवरण Georgia आकर्षण
निराश - एक नश्वर पाप
उहाँले जीवनको लागि राम्रो मानिस भेटे कहाँ?
रोटी sourdough, समीक्षा र व्यञ्जनहरु
Domodedovo ठेगाना, मेनु, समीक्षा मा "कोठा क्याफे"
छनौट र समीक्षामा सुझाव: घरेलू पानी आपूर्ति लागि पानी पंप